Huawei MatePad 10.4 သည်တရုတ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်ပြသပြီးနောက်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုဖော်ပြသည် Androidsis
Huawei Samsung နှင့်ယှဉ်ပြိုင်လိုခြင်းအားဖြင့်တက်ဘလက်ကဏ္inတွင်ရှိနေလိုသူ၊ ယခုလက်ရှိအသုံးပြုသူများသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များစတင်ရန်စဉ်းစားနေသည့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၏ကြေငြာချက်အပြီးတွင် Galaxy Tab S6 Lite ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ, ယခုတရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ မကြာမီ MatePad 10.4 ကိုကြေညာရန်စီစဉ်.
ယခုအချိန်တွင် Android နှင့်အခြားကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော MatePad ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြသည် Google ၀ န်ဆောင်မှုများကင်းမဲ့လိမ့်မည်HMS (Huawei Mobile Services) စတင်ပြီးနောက်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်လောက်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ် ၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များမှလာမယ့်စျေးနှုန်း ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ပိုစတာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်.
1 Huawei MatePad 10.4 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Huawei MatePad 10.4 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
တရုတ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များ JD နှင့် Vmall သည်အချက်အလက်စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Huawei MatePad 10.4Full HD + resolution ဖြင့် ၁၀.၄ လက်မအရွယ် panel ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ 10,4 နှင့်4GB RAM အတွက်သီးခြားပြင်ဆင်မှုနှစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ သိုလှောင်မှုတွင်ရွေးစရာနှစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ၆၄ နှင့် ၁၂၈ GB၊ အားလုံး MicroSD မှတစ်ဆင့်အများဆုံး ၅၁၂ GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
MatePad 10.4 သည်စံအဖြစ် Kirin 810 နှင့်အတူပါရှိသည်CPU သည်7nm ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော cores ရှစ်ခု (၂x Cortex A2 မှာ ၂.၂၇ GHz နှုန်းနှင့် Cortex A76 ခြောက်ခုနှင့် ၁.၈၈ GHz အမြန်နှုန်း ရှိ၍ ၇၂၂၅ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်) ။ သက်တမ်းကြာရှည်ခံရန်အတွက် EMUI 2,27 Lite ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီဆော့ဖ်ဝဲနှင့် application များ။
Huawei သည်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးတစ်ခုမှာ Wi-Fi ဖြစ်သည် ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံနှစ်ခုတွင် - 4/64 GB နှင့် 6/128 GB, LTE ဗားရှင်းတွင်6GB RAM နှင့် 128 GB သိုလှောင်မှုတစ်ခုသာရှိသည်။ Huawei MatePad 10.4 တွင် Stilus, Sound By Harmon Kardon စပီကာများနှင့် dual-camera၊ နောက်ကင်မရာ 8 MP နှင့် 8 MP selfie front တို့ပါရှိသည်။
Huawei မှateပြီလ ၂၃ ရက်တွင် MatePad 10.4 ကိုထုတ်ဖော်ပြသမည်, လက်လီအရောင်းဆိုင်နှစ်ခုမှတစ်ဆင့်သင်ယူရို ၁၃ ယူနစ်မှကြိုတင်ယူထားနိုင်သည်။ အလေးချိန် ၈၁၀ ဂရမ်သာရှိသည်။ The MatePad 10.4 ခန့်မှန်းစျေး ယွမ် ၁,၇၉၉၊ ယူရို ၂၃၃ လောက်ပြောင်းလဲရမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Android တက်ဘလက်များ » Huawei MatePad 10.4 သည်တရုတ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်ပြသပြီးနောက်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုဖော်ပြသည်
ဒီ Android application နဲ့သင့်ဖုန်းရဲ့အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးအအေးခံပါ